Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir oo rajo ka muujiyay Shirka Garoowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir oo rajo ka muujiyay Shirka Garoowe
Ardaan Yare 10 February 2021
Guddoomiyihii horey ee Gobolka Banaadir ahaana Duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa soo dhaweeyay Shirka uu Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo isugu yeeray Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Taabid Cabdi oo Qoraal soo saaray ayaa waxaa uu rajo wanaagsan ka muujiyay Shirka Madaxda ee 15-ka bishaan Febraayo ka furmi doona Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal, wallow Puntland ay ku talisay in lagu qabto Muqdisho.
Taabid ayaa sheegay in fursad kale u tahaya Madaxda dowladda Federaalka, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, isla markaana muhiim ay tahay in xal laga gaaro khilaafka hareeyay qabsoomida doorashada Soomaaliya ka dhaceysa.
“Waa wax wanaagsan inaan wax ku qaadano waaqaca lama gudbaanka ah, wallow mar walba ay haboon tahay in fogaan-arag la yahay. Waan soo dhaweynayaa in fursad la siiyo wadahadallada masiiriga ah, waxaana rajeyneynaa in shirkan uu noqdo mid miradhal ah, oo lagu dhameystirayo heshiiskii hirgelinta doorashada ee 17 Sept 2020. Shirrarkii hore waxaa muuqatay in 80% heshiis laga gaaray, sidaa darteed waxaa sahlan in 20% dhiman laga heshiiyo. Dalka iyo dadkuba dan uguma jirto in waxwalba eber laga soo bilaabo” ayuu yiri Taabid Cabdi.
Guuddoomiyihii horey ee Gobolka Banaadir Taabid ayaa sheegay in muddo kororsi iyo is barbar yaac doorasho ay dhibaato ku tahay dowladnimada Soomaaliya, isla markaana ay horseedi karto qalalaalso siyaasadeed, xili haata marxalad kala guur ah lagu jiro.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo Maanta hortegaya Xildhibaanada Barlamaanka
Aqalka sare ee Mareykanka oo War kasoo saaray khilaafka Doorashada Somalia